Fodiamandry olom-boafidy :: Voalevina haingana teny Anjanahary ny depioten'i Morombe • AoRaha
Nalevina teny amin’ny fasam-bahiny, teny Anjanahary, omaly antoandro, ny razan’ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Morombe, Rakotomalala Lucien. Nindaosin’ ny fahafatesana vokatry ny aretina nahazo azy, afak’omaly alina, izy.
Tao anatin’ny lamina mifanaraka amin’ny fepetra arapahasalamana ao anatin’izao ady amin’ny valanaretina Covid-19 izao no nanatontosana ny fombafomba rehetra. Tsy nisy kosa ny fanamarinana ny fodiamandriny ho avy amin’ny valanaretina, saingy ny tsy fahafahana mandevina mivoaka ny faritra Analamanga no isan’ny nanitrihana haingana azy, tetsy Anjanahary, araka ny fantatra.
Tsy nanaovana lanonana ofisialy amin’ny maha olom-boafidy azy ny fandevenana an’ity solombavambahoaka ity. “Tsy nisy ny fanaovam-beloma azy araka ny tokony ho izy satria manaraka ny fepetran’ny hamehana ara-pahasalamana isika. Efa noraisin’ireo tompon’andraikitra an-tanana kosa ny momba azy”, hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, omaly.
Namaly tamin’ny ampahany an’ireo fanontaniana manodidina ny fahalasanan’io olomboafidy io ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialin’ny Ivon-toeram-pibaikoana ny ady amin’ ny Covid-19, omaly. “Tsy nahazo tatitra momba ny fahafatesana farany vokatry ny valanaretina ny tenako, satria ny taritra ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana ihany no lazaiko. Raha misy tokoa anefa izany dia tsy afenina akory, sanatria”, hoy izy.
Etsy an-kilany, dia nikatona tanteraka, nanomboka afak’ omaly, ny lapan’ny Antenimieram-pirenena, eny Tsimbazaza. Miato avokoa ireo mpiasa eny an-toerana. “Misy ny famendrahana fanafody hatao ka izay no nandraisana an’io fepetra io”, hoy Razanamahasoa Christine.
Efa nivaly ihany koa ny fitiliana natao tamin’ireo solombavambahoaka niatrika fivoriana teny Ivato, saingy tazonina ho tsiambaratelo ny valin’izany, araka ny fanamarihan’ny filohan’ ny Antenimieram-pirenena hatrany.
Kojakoja fanasan-tanana :: Orinasa roa ambin’ny folo nahazo alalana hivarotra
Fisolokiana volabe :: Lehilahy lehibe nisandoka ho mompera